More 777 packs it
mubvunzo More 777 packs it
1 gore 11 ago #631 by kevrick25
Ndinoda 777 mega pack yaunoungana pamwe chete fsx, id id kuona mahwendefa matsva e777 sezvo iwe chete waita 777-200LR. Peji ye -200ER uye -300ER yaizova yakanaka. Ive akawana mapepa kune aya kune imwe nzvimbo asi VC yavo inogadzirisa zvakanyanya maererano neshoko rinokosha rinosunga.
Tariro iwe unogona kutarisa mukati mazvo.
1 gore 11 ago #636 by Gh0stRider203
Hazvisi zvakaoma kuparadzanisa VC ... kana kuti zvishoma, saka ndinonzwa lol ndine 737 ine cockpit yakanaka chaizvo uye yakanaka VC (kunyange ini handisashandisi lol) uye kana ndaifanira, ini 'D inoparadzira VC kune dzimwe injini dze2 neyoyo.
1 gore 11 ago #637 by kevrick25
tsime raro kwete VC rinoda swapping kubuda kunyange ndinoziva yawo asina kuoma, ive vaaita zvose zvamarudzi freeware. ayo chete sei vamwe vanhu akaisa ukomba kuvhura.
Somuenzaniso, mashoko 777 Rikoooo inoita anoshandisa zvose chaishanda + # anofambidzana kuvhura zvakafanira ukomba akafanana panhongonya, fmc etc. vamwe vanhu, ronga kuti kuvhura posky util, zvichiita nd it / pfd hombe, etc. etc. uye dont kupa chero kuwana panhongonya Panel kutsausa zvinhu pamusoro chikonzero VC pacharo zvaasingakwanisi zvaunogona wokudhinda. Asi, nyore swap kwavo Panel forodha nokuda rikoooo kunoita zvifambe zvakanaka.
Plus, ndinofunga rikoooo aizoita zvirinani panguva kurongedza navo uye rinowedzera zvakawanda kuti muunganidzwa
1 gore 11 ago #638 by Gh0stRider203
Ndinofunga munogona kushandura kuti panel.cfg
1 gore 11 ago #639 by Gh0stRider203
Ndinoziva randaifanira aongorore panel.cfg kuwedzera zvinhu, zvakadai somunhu GPS. Handioni chikonzero haugoni chete kuzodzosera kuronga hurongwa uye chii kwete ...
1 gore 11 ago #641 by kevrick25
Ndakatoiverenga pezvose, i chete akauya anoratidza kuita zvakawanda 777 packs it, kana rongedza ine 200 uye 300 mairi pachinzvimbo chete 200LR oga. Just Saizvozvowo yake A330 rongedza anogona ane A332 uye A333 raMwari
1 gore 11 ago #642 by CSTT-CYYZ
Neniwo somunhu rongedza N-2 pamwe mhepo France itsva ruvara uye mhepo Canada, KLM itsva ruvara, United Airlines, JAL, Ana, Delta, Air Korean, LH Cargo, B777-300ER Klm - Air Canada Emirates - Egyptair - Tam-Swiss -BA - Air transat ficitve. wazviita
Time chokusika peji: 0.687 mumasekonzi